Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, February 13, 2012 Monday, February 13, 2012 Labels: ရသစာစုများ , နှစ်သက်မိသော စာစုများ
အဖွားမေရီသည် စိတ်သဘောပြည့်ဝပြီး အေးချမ်းသိမ်မွေ့ကာ အဖိုးအပေါ်မှာလည်း အစွမ်းကုန် ချစ်ခင်ပြုစု ယုယတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးကတော့ တစ်ချိန်တုန်းခါက စိတ်မြန် လက်မြန်နှင့် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ၊ မိသားစုရဲ့ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့ကို အစစ ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ၂ကြိမ်လောက် လေဖြတ်ခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အိမ်တွင်း အိမ်ပြင် လမ်းလျှောက်ဖို့တောင် အနိုင်နိုင်၊ စကားပြောဖို့ပင် နှုတ်က မသွက်တော့ဘဲ လေးလံ ထိုင်းမှိုင်း ဖြစ်နေရပါပြီ။ ဘုရားကျောင်းလည်း မသွားနိုင်၊ အိမ်နီးနားချင်းများ၏ အိမ်တွေကိုပင် မလည်ပတ်နိုင်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်နီးပါး ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးသည် သူပိုင်ဆိုင်သော အချိန်တော်တော်များများအား တီဗီရှေ့တွင် ထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေရသည်ကသာ များလေသည်။ အဖိုး တစ်ယောက် အဖွားမေရီ အလုပ်လုပ်နေချိန်များတွင် တီဗီမှ လာသော သတင်း အစီအစဉ်နှင့် အခြား အစီအစဉ်များကို ထိုင်ကြည့်လို့ နေခဲ့ရသည်။ အဖွား အားလပ်သည့်အခါတွင်တော့ ၂ယောက်သား စကားပြောရင်း၊ တီဗီကြည့်ရင်း၊ စာဖတ်ကြရင်း အချိန်ကုန်ရတော့သည်။ အဖိုးအတွက်မှာ အဖွား၏ အကူအညီသာ မပါလျှင် ထိုင်ခုံကနေ နေရာရွှေ့ဖို့၊ အိပ်ရာဆီ သွားဖို့တောင် ခက်ခဲလွန်းလှ ပါသည်။
အဖွားသည် အဖိုးကို နေ့စဉ် အိပ်ရာမှ နိုးထစေပြီး နံနက်စာကျွေးမွေးရန် ထမင်းစားခန်းသို့ သွားနိုင်ဖို့ရန် ကူညီပေးလေ့ ရှိသည်.. နံနက်စာ စားသောက်ပြီးချိန် မှာတော့ အဖွားက ပန်းကန်များကို ဆေးကြော သန့်စင်နေစဉ် အဖိုး ခေတ္တ အနားယူစေနိုင်ရန် ဧည့်ခန်းတွင်းရှိ အဖိုးထိုင်နေကျ ပက်လက် ကုလားထိုင်လေးမှာ ထိုင်ခိုင်းထားကာ တီဗီကြည့်စေသည်။ ပန်းကန်ဆေးကြော သန့်စင်နေရင်းမှာပင် အဖိုးများ တစ်ခုခု လိုအပ်နေသလား၊ ဘာလုပ်ပေးဖို့ လိုဦးမလဲ ဆိုသည်ကို မကြာခန လှမ်းလှမ်း ကြည့်ပြီး အဖွားက မေးလေ့ ရှိသည်။ ထို အဖြစ်အပျက်တွေသည် အဖိုးနှင့် အဖွားတို့၏ နေ့စဉ် အဖြစ်အပျက် ကလေးတွေသာ ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးအပေါ်တွင် အဖွားမေရီ တစ်ယောက် မငြီးမငြူ ဂရုတစိုက် ပြုစုယုယကာ အိမ်ထောင်သက်နှစ်-၅၀ ကြာလာသည့်တိုင် အဖိုးအပေါ် သူမ၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုက လန်းဆန်း တောက်ပနေတုန်း၊ အိမ်ထောင်ဦး ကာလက ကဲ့သို့ နုနယ် ပျိုမြစ်နေ တုန်းသာ။
အဖွားသည် အဖိုးအပေါ်တွင် အလွန်တရာ ချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာ ရှိခဲ့သ်ာလည်း အဖိုးကတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို သူ့တာဝန်ကျေအောင် ထမ်းဆောင်လျှင် ပြီးပြီဟုသာ သဘောထားပြီး ဇနီးမယား အပေါ် ယုယုယယ မနေတတ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးရင်ထဲမှ အချစ်ဆိုသည့် အရာကိုလည်း အဖွားသိအောင် ဘယ်ခါမှ ထုတ်မပြောတတ်သူ ၊ ပြောခဲ့သူတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အိမ်ထောင် သက်တမ်း ကာလတစ်လျှောက်တွင် အဖိုးက အဖွားအတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ဆိုသည်မှာ ဘယ်သောခါမှ ၀ယ်ပေးသည် မရှိခဲ့ဖူးပါ။ အဖိုး၏ ခံယူချက်မှာ ငွေကြေးဥစ္စာ လုံလောက်အောင် ရှာဖွေပေးပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အဖွား လိုအပ်တာ မှန်သမျှ စိတ်တိုင်းကျ ဝယ်ယူခွင့် ရှိနေပြီဖြစ်၍ “သူမ ကြိုက်နှစ်သစ်ရာ ဝယ်ယူနိုင်သည်၊ သူကိုယ်တိုင် ဝယ်ပေးရန် မလို။” ဟူသော အတွေးမျိုး ရှိသူဖြစ်သည်။
အဖိုး၏ ထိုအကျင့်စရိုက်သည် ညားကာစ အိမ်ထောင်ဦးကာလတွင် အဖွားအတွက် စိတ် အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာ၊ မကျေနပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အဖိုးသည် သူမအား တကယ် ချစ်မှ ချစ်ခဲ့ပါရဲ့လား ဟူသော သံသယသည် အဖွားမေရီ စိတ်ထဲတွင် အမြဲတမ်း ဖိစီးခဲ့သော်လည်း အိမ်ထောင် သက်တမ်း ကြာလာသည်နှင့် အမျှ မိမိအိမ်ဦးနတ်ကို သဘောပေါက် နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားရတော့သည်။ အဖိုးသည် အိမ်ထောင် တစ်ခုလုံးအတွက်ရော သူမအတွက်ပါ အလွန်ကောင်းမွန်သော အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည်မှာ သူမ အသိဆုံးဖြစ်သည်။ မိသားစု အတွက် လိုလေသေး မရှိရအောင် ငွေကြေးကို ရှာဖွေပေးခဲ့သည်။ အဖွား လိုချင်သော ပစ္စည်းဟူသမျှ စိတ်တိုင်းကျ ၀ယ်ယူခွင့်ပေးထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အဖိုး ကိုယ်တိုင် ဝယ်ပေးလေ့ မရှိသော လက်ဆောင်နှင့်၊ ထုတ်မပြတတ်သော အဖိုး၏ အကြင်နာတို့အတွက် လိုချင် တပ်မက်စိတ်၊ မက်မောစိတ် ဖြစ်မနေတော့အောင် သူမကိုယ်ကို ကြိုးစား၍ စိတ်ကို ဖြေသိမ့်တတ် ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အဖိုး၏ ချစ်ခင်ယုယမှု၊ အသိအမှတ်ပြုမှု တို့ကိုလည်း ရရှိသည်ဖြစ်စေ မရသည်ဖြစ်စေ အဖိုးအပေါ်ထားသော သူမ၏ ချစ်ခင်မြတ်နိုးစိတ်၊ ကြင်နာသဒ္ဓါစိတ် တို့ကိုတော့ဖြင့် ယခင်အတိုင်း ထားမြဲ ထားနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခုသော ဖေဖော်ဝါရီလ၏ အေးမြသော မနက်ခင်းတစ်ခုတွင် တီဗီကြည့်နေသာ အဖိုးထံသို့ လျှောက် လာကာ “ကျွန်မ နေ့လည်စာ ချက်ပြုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ဦးမယ်” .. ဟု တီဗီ ကွန်ထရိုလ်းကို အဖိုးလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ရင်း အဖွားက ပြောလိုက်ပါသည်။ “တစ်ခုခု လုပ်ချင်တာ၊ လိုချင်တာရှိရင် ကျွန်မ အပြင်ထွက်လာတဲ့အထိ ခဏလောက်စောင့်နော်.. တစ်ယောက်တည်း မနိုင်မနင်း လျှောက်မလုပ်နဲ့”.. ဟု စိတ်မချစွာ အထပ်ထပ်ပြောရင်း မီးဖိုခန်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားပါသည်။ အချိန်အနည်းငယ် ကြာသော် စားသောက်စရာများ ချက်ပြုတ်ပြီး၍ အိမ်ရှေ့သို့ အဖွား ပြန်ထွက်အလာတွင် အဖိုးကို ကုလားထိုင်တွင် မတွေ့ရတော့ပေ။
အဖွားမှာ ရုတ်တရက် ပြာဝေသော စိတ်ဖြင့် အဖိုးကိုင်နေကျ တောင်ဝှေးထားရာ နေရာကို ကြည့်လိုက်သည့် အခါတွင် တောင်ဝှေးမှာ နေရာတွင် မရှိတော့ပေ။ အဝတ်ဘီရိုမှာလည်း ပွင့်လျှက်ရှိပြီး အဖိုး၏ အပေါ်ဝတ် ကုတ်အင်္ကျီနှင့် ဦးထုပ်မှာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီ။ အဖိုးသည် တစ်နေရာရာသို့ ထွက်ခွာ သွားပေပြီ။ အဖွားမှာ သွေးရူး သွေးတန်းဖြင့် ဘီရိုတွင်းမှ ကုတ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို အမြန်ကောက်ဝတ်ကာ အိမ်တွင်းမှ အပြေးတစ်ပိုင်း ထွက်ကာ ဟိုဟိုဒီဒီ မျှော်ကြည့် မိလေသည်။ အဖိုးသည် ခပ်ဝေးဝေး ကိုတော့ဖြင့် ရောက်လိမ့်ဦးမည်ဟု သူမ မထင်ပေ။ အဖိုး တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့ရန် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးပမ်း အားထုတ်ရမည်မှာ သေချာလေသည်။ ထိုအချိန်သည် အလွန် အေးချမ်း လှသော ဖေဖော်ဝါရီလ ဖြစ်သော်ကြောင့် နှင်းပွင့်လေးများက ကျဆင်းနေချိန် ဖြစ်လေ သည်။ အပြင် ဘက်တွင်လည်း နှင်းပွင့်လေးများ အဆက်မပြတ် ကျဆင်းနေမှုကြောင့် လမ်းမထက်တွင် အဖြူရောင် နှင်းပြင်ကြီးက ဖုံးလွှမ်းစ ပြုနေပြီဖြစ်သည်။
ယခုလိုအချိန်တွင် နှင်းတို့ဖုံးလွှမ်းနေသော လမ်းမထက်တွင် လူကောင်းတစ်ယောက်ပင် လမ်းလျှောက်ဖို့ ခက်ခဲနေပြီဖြစ်ရာ အဖိုးလို အခြားသူတစ်ဦးဦး၏ အကူအညီနှင့်မှ လမ်းလျှောက်နေရသူ တစ်ဦးအတွက်မူ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိတော့ပေ။ “သူဘယ်ရောက်နေပြီလဲ .. ဘာကြောင့်များ အိမ်ကနေ မပြောမဆို တစ်ယောက်တည်း ထွက်သွားရတာလဲ ” စသည်ဖြင့် သူမ အတွေးတွေတွင် ပူပန်ခြင်း၊ နားမလည်နိုင်ခြင်း များစွာ ရောထွေးလျှက် လက်နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်နှယ်နေမိရင်း ဂဏှာမငြိမ်စွာ ဟိုဘက်လျှောက်၊ ဒီဘက်လျှောက်ဖြင့် လမ်းမပေါ်တွင် အရူးတစ်ယောက်နှယ် ရှိနေရလေသည်။ ကျဆင်း လာနေသော နှင်းဖွဲများကိုလည်း ဂရုမထားမိ၊ ရက်စက်လွန်းစွာ အေးစက်လှသော ဆောင်းဒဏ်ကိုလည်း သတိမပြု မိလောက်အောင် သူမ၏ စိတ်အစဉ် တစ်ခုလုံး အဖိုးအတွက် ပူပန်ရခြင်းများဖြင့်သာ ရင်မှာ လောင်မြိုက်၍ နေလေတော့သည်။
ထိုစဉ် လမ်းထောင့် တစ်နေရာမှ တစ်လှုပ်လှုပ် လျှောက်လာသော တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ပုံရိပ်ကို သူမ တွေ့လိုက်ရလေသည်။ စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်လိုက်သောအခါ အဖိုးဖြစ်မှန်း သေချာသွားလေသည်။ “အိုး သူပြန်လာပြီ” အဖိုး ဘယ်နေရာသို့သွားပြီး ပြန်လာသည်ဖြစ်စေ သူမမျက်စိရှေ့တွင် ဘေးမသီ ရန်မခ မြင်လိုက်ရသည်ကပင် ဝမ်းသာလွန်းလှပြီ။ သူမကျေနပ်ရပါပြီ.. အဖိုး၏ ကုတ်အင်္ကျီသည် ပုခုံးထက်မှ လျှောကျလို့ နေပြီး အဖိုး၏ လက်တစ်ဖက်တွင် တောင်ဝှေးနှင့် အတူ အထုပ်တစ်ထုပ်ကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်။ အဖိုးရောက်အလာကို စောင့်ဆိုင်းဖို့ စိတ်မရှည်နိုင်တော့ပဲ သူ့ဆီသို့ အမြန်ရောက်အောင် ပြေးသွားမိတော့သည်။ အဖိုးအနား ရောက်သောအခါတွင်မှ အခြေ အနေ ကောင်းမွန်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသဖြင့် စိတ်သက်သက်ရာ ရပြီးနောက်တွင် သူမပါးစပ်မှ စကားလုံး များ အဆက်မပြတ် ထွက်လာမိတော့သည်။
“ကျွန်မ ရှင့်ကို ခနလေး ထားပြီး နေ့လည်စာ သွားပြင်ချိန်လေးမှာ ကျွန်မ ပြန်အလာကိုတောင် မစောင့်နိုင်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း ထွက်သွားရအောင်က ရှင်ကဘာကိုများ ဒီလောက်အရေးတကြီး လိုအပ်နေလို့လဲ။ ကျွန်မ ရှင့်ကို ဘယ်လောက်တောင် စိတ်ပူရတယ်ဆိုတာ ရှင်မသိဘူးလား… ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်အရာ ကများ ရှင့်ကို အရေးတကြီး အပြင်ထွက်သွားရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာလဲ ” ဟု ပြောပြော ဆိုဆိုဖြင့် သိချင်စိတ်ကို ထိမ်းချုပ်မရတော့ဟန်နှင့် အဖိုးလက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော အထုပ်ကလေးကို အလျှင်အမြန် ဆွဲယူလိုက်လေသည်။ အဖိုးထံမှ ထွက်ပေါ်လာမည့် ရှင်းပြ စကားကိုပင် စောင့်ဆိုင်းနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ လျှင်မြန်လွန်းလှသော စိတ်ဇောဖြင့် အထုပ်ပေါ်မှ စက္ကူများကို ဆွဲဖြည်မိတော့သည်။ စက္ကူများ ပြေသွားသည့် အထုပ်တွင်းတွင် ဘူးကလေးတစ်ခု ထွက်ပေါ် လာခဲ့သည်။ ဘူးကလေးအား တုန်ယင်သော အဖွား၏ လက်အစုံဖြင့် ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်တွင် ထွက်ပေါ်လာသည်က
အံ့သြခြင်းကြီးစွာဖြင့် အဖိုးမျက်နှာကို အဖွားက စောင်းငဲ့၍ ကြည့်လိုက်သည်တွင် “ဒီနေ့ဟာ ငါတို့ ၂ယောက်ရဲ့ နှစ်၅ဝပြည့် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်း ဖြစ်သလို ချစ်သူများနေ့လည်း ဖြစ်တယ်လေ။ ငါ့ဘဝမှာ မင်းကို လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မပေးခဲ့ဖူးဘူးနော်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ငါ့ရင်ထဲမှာ မင်းကို လက်ဆောင်ပေးချင်စိတ် ပြင်းပြင်းပြပြကို ဖြစ်မိတယ်။ မင်းဟာ ငါ့အပေါ် အမြဲတမ်း ကောင်းနိုင်ခဲ့၊ ချစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ခုလို ငါ မသန်မစွမ်း ဖြစ်တော့လဲ အနစ်နာခံပြီး မငြိုမငြင် ပြုစုခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ဘက်က မင်းအပေါ်မှာ ဘာမှ တာဝန် မကျေခဲ့သလို ခံစားမိတယ်။ မင်းရဲ့ ဂရုတစိုက်၊ ချစ်ခင် မြတ်နိုးမှုတွေကို အသိအမှတ် မပြုသလို နေခဲ့မိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်း မီးဖိုထဲမှာ ချက်ပြုတ်နေတုန်း ခန အပြင်ထွက်သွားပြီး ဒါလေးကို သွားဝယ်တာပါ… ဒီ လက်ဆောင်လေးဟာ ငါ့တစ်သက်မှာ မင်းကိုပေးဖူးတဲ့ ပထမဆုံး လက်ဆောင်လဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ ဒါလေးကို ငါတို့ရဲ့ နှစ်၅ဝပြည့် မင်္ဂလာ လက်ဆောင်အဖြစ်ရော၊ ငါ့ရဲ့ ချစ်လက်ဆောင် အဖြစ်ပါ အသိအမှတ်ပြုပြီး မင်းလက်ခံပေးပါနော်” သူမဘယ်တုန်းကမှ မရရှိခဲ့ဖူးသည့် နူးညံ့ချိုသာသော အသံကို အဖိုးထံမှ တိုးညှင်းစွာ၊ ဖြေးလေးစွာ၊ တုန်ယင်စွာနှင့် မသဲမကွဲ ကြားလိုက်ရတော့သည်။ သို့သော် မသဲကွဲပေမဲ့လည်း အဖိုးပြောသမျှကို သူမ လုံးစေ့ပတ်စေ့ နားလည်နိုင် ပါသည်။ ဒီလူနှင့် နေခဲ့သည်မှာ နှစ် ၅ဝပင် ရှိခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလားလေ။
အဖိုး၏ စကားဆုံးသွားသည့်အခါ အဖွားမျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်များ ပြည့်လျှံ အိုင်ထွန်း လာပါတော့သည်။ အဖွားသည် အဖိုး၏ လက်ကလေးကို အသာအယာ ဆွဲကိုင်ကာ သူမ ပါးပြင်နှစ်ဘက်ပေါ် အပ်ထားမိ လိုက်သည့် အချိန်တွင်တော့ အဖွား၏ မျက်ရည်များက အဖိုး၏ လက်ပေါ်သို့ တသွင်သွင် စီးကျလာ တော့သည်။ ထို့နောက်တွင် အဖွားသည် အဖိုး၏ လက်ကို ခိုင်မြဲစွာ တွဲကာ အိမ်ဆီသို့ ၂ယောက်သား ပြန်လာခဲ့ကြတော့သည်။ အဖွား၏ မျက်နှာပေါ်တွင် မျက်ရည်စများနှင့်။ သို့သော် မျက်ရည်စများကြားမှပင် ကြည်နူးမှု အပြုံးလေးတစ်စက တွဲခိုလျှက် ရှိနေလေသည်။ အဖိုး၏ မျက်နှာပေါ်တွင်လည်း အပြုံးလေးက မပီဝိုးဝါး ခပ်ရေးရေးလေး။ သို့သော် အဖိုး၏ ကြည်နူးရိပ် သန်းနေသောအပြုံးကို အဖွားတစ်ယောက် ကောင်းစွာ ခံစား သိရှိပါလိမ့်မည်။ ဘယ်တုန်းကမှ မဖော်ပြခဲ့ဖူးသော အဖိုး၏ အချစ်တို့သည် ယခုအချိန်ရောက်မှ အဖွားတစ်ယောက် သိခွင့် ရလိုက်သော်လည်း အဖွားစိတ်ထဲတွင် တွေးနေမိသည်က “အချစ်အကြောင်း ပြောဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ် မရှိပါဘူးလေ”.. ဟူ၍သာ..။ ထို့နောက်တော့ “ကျွန်မကို လက်ဆောင်မပေးလဲ ရှင့်ကို အမြဲချစ်နေမှာ၊ ဂရုစိုက်နေမှာပါ အဖိုးကြီးရယ်” ဟု ရှက်ပြုံး၊ ကြည်နူးသည့် အပြုံးလေးနှင့် အဖိုးကို ပြောလိုက်ပါတော့သည်။
ဒီရက်ပိုင်း ကျွန်မ စာအသစ်ထပ်ရေးဖို့ မအားမလပ် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် နီးပါးလောက် က ရေးခဲ့တဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို ပြန်တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီပိုစ့်ဟာ Chicken Soup for the Bride's Soul မှ Danise Jacoby ရဲ့ A Change of Heart ကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဘဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ အေးချမ်းကြပါစေရှင်..
23 Responses to “မရခဲ့ဖူးတဲ့လက်ဆောင်...”
February 13, 2012 at 4:10 AM
Whatagreat love story! Thank you.
February 13, 2012 at 7:17 AM
February 13, 2012 at 7:22 AM
လူသားအားလုံး နောက်မကျတဲ့ အချိန်တစ်ခု အတွင်းမှာ
ကိုယ့်ဘေးနားက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကို ဂရုပြုမိနိုင်ကြပါစေ.........
February 13, 2012 at 8:58 AM
ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ စိမ်း။
February 13, 2012 at 9:37 AM
တကယ်လို့များ.. ဒီလိုပြောခွင့်မကြုံပဲ ကွဲကွာသွားခဲ့ရရင်ကော... လူ့ဘ၀မှာ အချိန်ဆိုတာ သိပ်တိုတောင်းလွန်းပါတယ်.. ဒီတော့ တစ်ယောက်မေတ္တာကို တစ်ယောက်အတွက် အမြဲပြသပေးနေတာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်....
တန်ဖိုးဆိုတာ ရင်ထဲကနေ ခံစားရတဲ့ အရာမို့ ဖိုးဖိုးလို ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးနဲ့ လူသားတိုင်း ချစ်နိုင်ကြပါစေ... ချောလည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ပါစေ ..
မချောရေ.... http://www.surfbouncer.com/ သုံးကြည့်ပါလား။ ကျွန်တော် ကျော်ခွတဲ့ဟာတွေ ထဲမှာတော့ ဒီကောင်က သုံးရတာ အဆင်အပြေဆုံးပဲ။ https://www.securitales.com/ လိုမျိုး web page တစ်ခုချင်းစီ ကျော်ရစာမလိုပဲ server ပြောင်းချိတ်ပြီးသားဆိုတော့ လင့်တွေ တထောကြီး ဖွင့်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ဈေးတော့ နည်းနည်းပိုကြီးပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်လေး ကြိုက်တယ်။ :)
February 13, 2012 at 1:52 PM
အရမ်းခံစား ရ တဲ့ ပို့စ် ပါ.. အဲဒီ လို အိုမင်းမစွမ်း ဖြစ်တဲ့ အထိ တဦးနဲ့ တဦးချစ် ချင်တယ်.... လူ့ဘ၀ က တိုတိုလေး ပါ.. မသေခင် တဦးပေါ် တဦး ကြင်နာ ကြတာ မင်္ဂလာ တပါး ပါ ။
အချစ်နဲ့ မကင်း ကြသူများအားလုံး မိမိချစ်သူ နဲ့ အထူတကွ သေတပန်သက်တဆုံး အထူနေကြ ရပါစေ လို့
မင်းဆံပင်ဖြူဖြူမှာ စံပယ်ကုံးလေး ပန်ပေးမယ်..ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး သတိရမိတယ်ဗျ...။ မျှဝေ ကြည်နူးစရာပါ။
February 13, 2012 at 4:24 PM
နဲနဲလေး ဖတ်လိုက်တာနဲ့ ဖတ်ပြီးသားကြီးမှန်းသိလိုက်တယ်
ချော ဆားချက်တယ် .... ဒါပေမယ့် ထပ် ဖတ် သွားတယ် .... သိလား .....
ဖတ်လို့အပြီးမှာ ရင်ထဲမှာကြည်နူးမှုတွေကျန်ခဲ့တယ်...း))
အသက်တွေ အိုမင်းလာပေမယ့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားက အမြဲနုပျိုနေတယ်။ ခိုင်မြဲတဲ့ မေတ္တာတွေ...။ ကိုကြီးကျောက်ပြောသလိုပြောရရင် “ဒီဆားကချိုပါတယ်” ချောရေ..။ စကားမစပ် ချောရဲ့ Thamesအသစ်လေးကလဲ တမျိုးကြည့်လို့ ကောင်းတာပဲ။ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး...။
အချစ်ကတော့ အစဉ်အမြဲ နုပျိုလတ်ဆတ်နေတာပါဘဲ... အဖွားအတွက်ကတော့ ပြီးပြည့်စုံခဲ့တဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ချစ်သူများနေ့ လေးနဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ပြည့် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ လေး ဖြစ်ခဲ့မှာပါ...
မရခဲ့ဖူးတဲ့ လက်ဆောင် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီးတော့ တို့ အပြိုဂျီးတော့ မရလိုက်တဲ့ နှင်းဆီပန်းနဲ့ ချောကလက်အကြောင်း ရေးထားတာမှတ်လို့ ပြေးလာလိုက်တာ ဒီရောက်မှ အထင်နဲ့ အမြင် မှားပါရောလား ဟဲ ဟဲ ... အထင်သေးရကောင်းလားလို့တော့ စိတ်မခုနဲ့ပေါ့ ဒေါ်ချောရယ်း)
ဇာတ်လမ်းကလေး ကောင်းပါ့ဗျား...နှလုံးသားအာဟာရ စာစုတွေကတော့ ဘယ်သူပြန်ပြန် ဘယ်တော့ဖတ်ဖတ် ကောင်းပြီးရင်း ကောင်းရင်းပါပဲ...
ကြည်နူးစရာ လက်ဆောင်လေး ပါလားမမရေ.. ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားက ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိဘူးတဲ့ :):)
February 13, 2012 at 9:47 PM
ကြည်နူးစရာပို့ စ်လေး မချောရေ..
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ်မရှိဘူးဆိုပေမယ့် ၊ နဲနဲတော့ နောက်ကျတာပေါ့နော်..။ အဖွားက အရမ်း ချစ်နိုင်တာပဲ..။
Assateague Island သှား တောလား - ၂